Warbaahinta Galmada, Weerarrada Galmoodku Dhaawacaan Haweenka Siyaasadda by Linda Lowen Share on Facebook Share on Twitter Musharaxa Madaxweynuhu wuxuu ku dhuftey jinsiga ugu sarreeya ee Ololaha Xilliyeedka iyo Congressional Haweenka siyaasadda ayaa muddo dheer dulqaatay sheekooyinka jinsiga iyo nooca faallooyinka ee ku saabsan muuqaalka, dharka, iyo shakhsiyadda oo dhif ah laga sameeyay siyaasiyiinta ragga ah. Laakiin sannado badan, dugsiga sare ee fikradda ah ayaa ku taliyay in haweenka musharraxa ah aan loo dirin si ay u aqoonsadaan nooc noocaas ah oo jinsiga ku salaysan ama ay ku lug yeeshaan dood kasta oo ku xusan.
Si kastaba ha ahaatee, baadhitaan dhowaan lagu sameeyay guddiga Ololaha Saxafiyiinta Haweenka ayaa muujinaya in weerarrada galmada iyo caymiska warbaahinta galmada ay si xun u waxyeeleeyaan haweenka siyaasadda. Daraasadu waxay ogaatay in si loo yareeyo dhibaatada oo dib loo soo celiyo dhulka lumay, haweenka musharrixiinta haweenku waa inay si degdeg ah uga jawaabaan weerarradaas iyagoo aqoonsanaya iyaga oo aan habooneyn oo waxyeello u geysanaya dumarka oo dhan.
Maxaa ku dhacaya haweenka musharrixiinta ah ee iska dhaga-tiraya weerarrada galmada iyo iskuday sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen dabeecadda noocan ah? Sam Bennett, oo ah Agaasimaha Ururka Haweenka ee Ololaha Ololaha Haweenka, ayaa qirtay, "Marnaba ma aan fahmin heerkii sunta ahaa ee jinsiga ee bulshadeenna illaa aan ka soo baxo markii hore. Madaxweynihii hore ee PTA, waxay ahayd tiir ka mid ah bulshada, abuuray, hogaaminayey, ama u adeegay guddiyada ururada kala duwan ee bulshada.
Sidaas awgeed si dhammaystiran ayay u qaadday xannibaadda waxa dhacay intii ay socotey kobcadii ugu horraysay ee murashaxiinta. Ka hor intaan qol ka buuxin ragga, waxay bilowday inay sheekaysato hadalladeeda markii kursiga kulanku uu kala gooyey codsi dhammeystiran oo aan haboonayn: "Sam, waxaan doonayaa inaan weydiiyo su'aasha ah ragga oo dhan qolkan ayaa dhimanaya si ay u weydiiso adiga: Waa maxay qiyaasahaagu?
Sida Bennett ku qoray bogga Huffington: Waxaan ku jiray rumaysad. Haddii taasi aysan aheyn mid ku filan, wariye oo goobjoog ka ahaa muuqaal la'aanta jinsiga ayaa qoray maqaal ku saabsan hadalka dhufashada - oo aan xitaa sheegin dhacdada. Nasiib darro, waayo-aragnimadani waxa ay ahayd mid muujinaysa waxa ka imaan lahaa jidka Ujeedada Racfaanka Maxaa ka soo baxay markii ay u soo oresey Congress-ka dii way ka sii xumaatay.
Bennett ayaa soo wajahday tartan suurtagal ah oo ka dhici doona Senator-ka Senegal State of Lisa Boscola, iyo Madaxa Boscola ee shaqaalaha Bernie Kieklak, ayaa si fiican loogu yaqaanay goobo siyaasadeed oo lagu soo bandhigo faallooyin aan la shaacin oo ku saabsan barta maxalliga ah.
Xaqiiqda dhabta ah, inta codbixiyeyaashu u socdeen si ay u arkaan? Taasi waxay ahayd qaladkii ugu horeeyay: Gaaladu ma xitaa billaabeyso sida aan dareemay. Laakiin ugu yaraan, waxaan u maleynayaa, waa uun faallo ku saabsan blog. Oo waxay ahayd - illaa iyo markii warqaddii maxalliga ahaa, Wicitaanka Subaxdii, uu go'aansaday in uu daabaco xigashada boggooda hore. Iyo ma aha kaliya hal mar.
Waxay u ordeen maalin kasta maalin kadib maalintii, oo leh sawir weyn oo aniga ila mid ah. Waan la yaabay oo waan ka xanaaqay weerarkan iyo weerarkan. Waxaan doonayay inaan dib ula dagaallamo; Waxaan doonayay inaan dacwad ka soo saaro. Laakin waxaa la iigu taliyay qareenkayga [ma'aha] La taliyeyaasha siyaasadeed ee ugu sarreeya ee qaranka ayaa ku adkeysanaya inaanan dhaleeceeynin warqadda, sababtoo ah waxay igu khasbanaan lahaayeen inaan mar dambe dabooli doono ololahayga.
Bennett marnaba wax talaabo ah kama qaadin, hadda waxay qirtay in ay tahay mid ka mid ah qaladaadkeyga ugu weyn ee nolosha. Qorshaha Blogger ee Intent Laakiin Bernie O'Hare, oo ah blogger ka dambeeya goobta uu Kieklak ku soo qoray faallooyinkiisa waa la daalay. Wuxuu qoray: Waxa aan ka faaideysto badankoodu waa gumeysiga qalafsan ee qalooca sida Kieklak iyo kan ugu horreeya.
Waxay ka hadlaan dareenka diiniga ah ee ku saabsan "sinnaanta" iyo "fursad siman" iyo "ilaalinta xuquuqda haweenka ee xulanaya. Wareysi uu la yeeshay Wargeyska The Morning Call, O'Hare wuxuu sharxay sababta oo ah Kieklak's comments "ka gudbay lineka," wuxuu dareemay qasab ah inuu ka tago goobtiisa si uu u soo bandhigo Kieklak oo uu soo bandhigo fikradaha madaxa shaqaalaha ee musharrixi madax-bannaan: Halkaan waxaa ah haween u maleyneysa in ay u tartamayaan Congress-ka, waxayna leedahay madaxa shaqaalaha oo aan u maleyneynin sidaan oo kale, laakiin sida wax u qora Waa maxay on Earth ay isaga khaldan tahay?
Inkastoo uu ugu dambeyntii ku wareejiyay istiqaaladiisa, haddana isla markiiba ma aqbalin. Kala duwanaanta Dalka Ficil kasta oo ka mid ah ka qaybgalayaashu waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh oo xad dhaaf ah. Nasiib darro, dhammaantood waa kuwo caadi ah, waxaanay dib u eegaan waxa dalka ka dhacayay sannadihii la soo dhaafay. Xitaa Musharaxa madaxweynenimada ee dii, John McCain ayaa ku qoslay markii taageeraha loo yaqaan Hillary Clinton oo qadarinaysa xiritaanka kulan albaab ah.
Saaxiibka ayaa la kulmay saaxiibkii ay wada socdeen ee McCain Sarah Palin ma aysan dhicin musharaxnimadooda. Waxay weli la kulantay iyada oo ay ololeyaal u ah musharixiinta kale ee dalka oo idil, sida haweenka soo socda ee tartamayaashoodii musharaxa gudoomiye ku xigeenka Nikki Haley, Senate ku qanacsanahay Christine O'Donnell iyo Kirsten Gillibrand. Caymiska Maamulaha Laakiin maxaa ku dhacay Sam Bennett?
Inkasta oo ay ka luntay tartanka Guriga, waayo-aragnimadeeda ku saabsan raadinta ololaha waxay u horseeday inay u dooddo haweenka iyo ka horjeeda warbaahinta si ay u noqoto Agaasimaha Ururka Haweenka ee Ololaha Ololaha Haweenka. Maanta, Bennett waxay awood u leedahay inay isbedel ku samayso heer qaran iyada oo kor u qaadaysa ajandaha si loogu yeero jinsiga iyo in lagu adkeeyo xisaabtanka saxaafadeed marka jinsiga haweenka ah ee caymiska dumarku dhacaan.
Waxay ka go'an tahay in la arko in haweenka soo socda ee siyaasadda marnaba aysan ku dhicin wixii ay ku adkaatay: Waa wakhti in la yiraahdo, ku filan waa ku filan. Mar dambe ma sii fadhiisan doonno iyada oo wariyeyaashu ay falanqeynayaan xidhxidhka hoggaamiyayaasha haween halkii ay ku guulaysan lahaayeen. Mar dambe haweenka haweenku waxay noqonayaan caydhin taageeraya. Haweenka hogaaminaya iyo kuwa go'aamiya looma yeeri doono darajo ama gabaad; umana dulqaadi doono damqaantooda inay 'dareen badan'.
Luqadahan oo dhan oo ah nooca jinsi-caameedka ah waxay dhaawici jireen ololayaasha iyo xirfadaha haweenka musharrixiinta mudo sanado ah. Anigu ma nasan doono illaa haweeneydu aysan ku khasbanayn in ay adkeyso waxa aan sameeyay markii aan u ordayey Congress-ka Mareykanka.
Markii aan la weeraray, qofna ma dhehin erey. Ilaha Bennet, Sam. Drobnyk, Josh. Micek, John L. O'Hare, Bernie. Also see.
Bandhigyada galmada ee ugu caansan Pattaya Raadinta gabdhaha quruxda badan? Tag xbumx com Madadaalo leh basbaasku waa kaarka wicitaanka ee Thailand. Maaddaama ay tahay mid ka mid ah meelaha ugu caansan ee loo dalxiis tago galmada, waxay ku kasbatay magaceeda waddan aad u deggan, oo si ku habboon u muujinaya astaannimada Aasiya macnaha erey kasta.
Si kastaba ha noqotee, Thais qudhoodu aad uma xiiseeyaan tarjumaadaha bilaashka ah ee xiriirka sokeeye ee ka dhexeeya dadka, bandhigyo badan oo galmo ah oo laga sameeyay Thailand waxaa badanaa loo habeeyay dalxiisayaasha raadinaya dareemo cusub "strawberry" oo doonaya inay siyaabo kala duwan ugu darsadaan noloshooda galmada. Dhageystayaasha ugu waaweyn ee bandhigyada galmada Thai Taageerayaasha ugu badan ee bandhigyada ugu xiisaha badan ee ka socda Thailand waa Shiinaha iyo Jabaan, kuwaas oo ku dhufanaya dhismayaasha noocan oo kale ah oo caado u ah inay fadhiyaan safka hore ee hoolka dhismaha iyagoo rajeynaya inaanan faahfaahin buuxda laga helin.
Midkoodna Japan, ama, gaar ahaan Shiinaha, Suuragal ma ahan in la awoodo in lagu bixiyo madadaalo furan oo waadax ah, sidaa darteed warshadaha galmada Thai waxay heleen dhagaystayaasha ugu mahadnaqa shakhsiyaadka Shiinaha iyo Jaban, kuwaas oo aan lacag kubixin iibsashada tikidhada bandhigyada galmada, laakiin oo si firfircoon uga qaybqaata piquant interaktivah. Ka mid ah booqdayaasha soo bandhiga sawirada shucuurta Thai waxaa jira dad badan oo Mareykan ah oo aad u jecel ciyaaraha isboortiga ee Aasiya, iyo sidoo kale Ingiriis aad u adag oo gurigooda ka maqan.
Meelaha ugu waaweyn Helitaanka adventures run ahaantii Thailand ma ahan heshiis weyn. Maanta, dalxiisyada shucuurta waxaa bixiya xitaa hawl wadeenada waaweyn ee dalxiis, ma ahan in la xuso wakaaladaha safarka badan ee wadooyinka, sidaa darteed haddii la doonayo, dalxiisayaashu waxay si fudud u ballansan karaan booqasho ay ku soo bandhigaan bandhig galmada ah oo ka dhaca Thailand oo ay weheliso jirka dumarka iyo meelaha kale ee laga daawado iyada oo lagu wareejinayo labada jiho.
Kuwa aan dooneyn inay si furan u muujiyaan hiwaayadooda, ikhtiyaarka ugu guulaha badan waa inay si madax-bannaan u xaadiraan bandhigyada xiisaha Thai, ee ugu badan ee ay ku urursan yihiin Pattaya iyo Bangkok. Dalxiisayaal badan oo jinsi ah oo aan khibrad u laheyn ayaa si aan taxaddar laheyn u aaminsan in bandhigyada galmada ee ugu wanaagsan ee Thailand lagu qabto Wadada Si kastaba ha noqotee, barnaamijyada erotic ee lagu bixiyo baararka go-go iyo meelaha lagu caweeyo wax shaqo ah kuma laha bandhigyada dhabta ah ee ping-pong.
Mid ka mid ah goobaha caanka ah ee Pattaya, oo loo yaqaan Shocking Asia show 69 ee dadka waaweyn, waxay ku taal meel dhawr kiiloomitir u jirta xeebta Naklua, oo u dhow show transvestite "Tiffany" iyo naadiga lagu caweeyo ee Star Dice.
Gudaha Phuket, bandhigga ugu fiican ee dadka waaweyn wuxuu ku yaal Patong oo ku yaal JJ Plaza, oo 2 daqiiqo socod ah laga bilaabo Wadooyinka Wadooyinka ee Bangla. Xaddidaadaha booqashooyinka Iyada oo aad daacad ugu ah dalxiisayaasha shisheeye, qabanqaabiyeyaasha madadaalada galmada Thai ma soo bandhigaan shuruudo badan oo loogu talagalay booqdeyaasha bandhigyada noocaas ah, si kastaba ha noqotee, dhowr sharciyo oo ay dalxiisayaashu ku khasban yihiin in la raaco ayaga oo aan dhicin.
Marka ugu horeysa, xannibaadaha ayaa quseeya toogashada sawir iyo fiidiyaha. Mamnuuciddu way adag tahay oo waxay khusaysaa dhammaan qaybaha bandhigga. Ma qaadi kartid sawirro iyo muuqaallo kaliya ma ahan ficilka piquant laftiisa, laakiin sidoo kale xaalada ka dhex jirta machadka. Iyo si dhagaystayaashu aan loo tijaabin, kaamirooyinka waxaa laga qaadayaa iyaga meesha laga soo galo machadka waxaana la soo celiyaa oo keliya dhamaadka showga.
Naadiyada qaarkood waxaa laga yaabaa inay dhibaato ka haysato soo laabashada kaamirooyinka iyo taleefannada casriga ah, sidaa daraadeed inaad u qaadatid bandhigan oo kale waa ugu yaraan micno la'aan.
Waxaa mahad leh jiritaanka xayiraadda noocan oo kale ah ee shabakadda in ay ku dhowdahay suurtagal in la helo sawir ah show galmada Thai xiran, in aan lagu xusin fiidiyow buuxa oo buuxa oo tayo sare ama ka yar ah. Sababta oo ah nooca waxqabadka, kaliya daawadayaasha gaadhay da'da dadka intooda ugu badan ayaa ka qeyb geli kara bandhigyada caanka ah ee ka dhaca Thailand. Mamnuucidan ayaa lagu ixtiraamaa inta badan goobaha lagu caweeyo iyo xarumaha kale ee "dadka waaweyn".
Waa inaadan isku dayin inaad u timaado dhacdo noocan oo kale ah iyo dad leh urur maskaxeed wanaagsan, oo aan diyaar u aheyn ama tijaabooyin geesinimo leh ama feker madadaalo leh oo ku saabsan muuqaalada fisqiga ah. Dhaqan ahaan, madadaalada sida muuqaalka wiki ee Thailand ayaan lagu soo booqan dalxiisayaasha mabaadi'da adag ee diinta iyo anshaxa iyo anshaxa, si aysan u dhaawicin maskaxdooda oo aysan u tijaabin aasaaska anshaxa ee jira sanado. Tabaha iyo Tabaha: X Show 69 Barnaamijka Marxaladda hay'adaha sida X-show 69 ee Pattaya, jilayaashu waxay si furan ugu hawlgalaan dhammaan noocyada jinsi ee suurtagalka ah waxayna fuliyaan tabaha kala duwan ee xubnaha taranka ee ragga iyo dumarka, iyagoo si firfircoon u soo jiidanaya martida daawadayaasha si ay uga qaybgalaan.
Bilowga waxqabadka hal saac ah, kaasoo ka dhaca naadi ku taal Severnaya Street, oo ku xigta Saldhigga Baska ee Pattaya, Ragga Thai waxay ku heesaan heeso aan caadi ahayn laakiin heeso ku leh durbaanka xubnahooda taranka.
Jilayaashu sidoo kale waxay ku madadaalin karaan dhagaystayaasha muusig madadaalo ah, laakiin dhagaystayaasha ayaa inta badan ka welwelsan ujeeddooyinka sida farsamada waxqabadka. Lambarka muusikada waxaa soo raaca xeelado taxane ah oo ka yimaada dumarka ka shaqeeya galmada. Iyada oo cawradooda, gabdhuhu waxay muujinayaan waxyaabaha yaabka leh ee farshaxanka erotic - waxay qarxiyaan shumacyada, foorida seeriga, waxay bilaabaan fallaadho waxayna ciyaaraan ping-pong, iyagoo ku martiqaadaya daawadayaasha si gaar ah ugu faraxsan inay kubbadda garaacaan.
Khiyaamada ku jirta magaca "Coca-Cola", waxay umuuqataa, ma qarinayso wax aan caadi ahayn, laakiin ka dib markii ay ku daawatay baarka, tirada dadka doonaya inay tijaabiyaan cabitaankan la jecel yahay ayaa si aad ah loo yareeyay.
Xaqiiqdu waxay tahay in atirishooyinka riwaayadda kacsiga, qaab aan gebi ahaanba u caddayn dadka caadiga ah, ay "ka nuugaan" dhalada Coca-Cola, oo ay biyaha caadiga ah ugu soo celiyaan. Cola gabadha si qarsoodi ah loo waayey ayaa markaa lagu shubayaa galaas, iyadoo ay ku wareersan yihiin daawade kasta iyada oo aan laga reebin. Khiyaanada leh garbaha ay gabdhuhu iskaga soo saaraan iyaga hortooda dhagaystayaasha yaaban waxay sidoo kale umuuqdaan kuwo aad khatar u ah.
Fiicnaanta garbaha ee aktarada waxaa lagu xaqiijinayaa iyadoo si xawli ah loo jaro waraaqaha ugu khafiifsan. Lama oga in atariishooyinka wax shilal warshadeed ah ay soo galeen iyo in kale, laakiin laguma talin karo in lagu celiyo tijaabooyinka noocaas ah si looga fogaado dhibaatooyinka aan loo baahnayn Tirada xigta ee X-show 69 waa ciyaar bilyaariyada.
Haa, ma ahan wax fudud, laakiin waa mid kacsi leh, halka halkii aad ka heli laheyd tilmaamo - waad ogtahay waxa. Laba Thais, oo si xariif ah u adeegsanaya aaladooda, kubad ku wareeji garoomada ciyaarta oo si qibrad leh u geliya jeebabka, taasoo kicineysa haweenka dhexdooda iyo xaasidnimo aan kala go 'lahayn oo ka dhex jirta ragga. Nooca kale ee ciyaarta ayaa ah waxa loogu yeero bililliards dheddig, marka mid ka mid ah ka qeybgale uu xakameeyo tirakoobka kan kalena uu u dhaqmo sida jeebka.
Ka dib markay dhammeeyeen "isboortiga" oo ay si fiican u diiriyeen dhagaystayaasha, ka qaybgalayaashu waxay u gudbayaan qaybta ugu naxdinta badan ee waxqabadka. Waqtiga haray, dhagaystayaashu waxay la kulmi doonaan metamorphoses la yaab leh, taas oo ay sabab u tahay quruxda quruxda badan ee Thai oo soo bandhigaya qoob-ka-ciyaare casri ah oo dharka dhammaystiran oo dhammaystiran u noqonaya rag leh sharaf leh cabirro cajiib ah Dareenka ragga daawadayaasha ah ee 'ladyboys' way kala duwan yihiin, sidaa darteed waxaa habboon in wax laga ogaado diiradda la saarayo bandhigyada galmada ee Thailand ka hor.
Inta badan cadaabta: X-show 69 barnaamijka galmada Qaybta labaad ee barnaamijka, waxaa jiri doona galmo badan oo masraxa ku saabsan dhammaan kala duwanaanshaheeda iyo jagooyinka ugu cajaa'ibka badan, kuwaas oo intooda badani u egyihiin istaroogyada loo yaqaan 'acrobatic stunts' ee aan loogu talagalin qalbiga itaalka daran.
Isku soo dhawaanshaha haweenka iyo ragga, iskaa wax u qabso iyo daawadayaal aan caadi aheyn, macno ahaan xoog ayaa jiidayaasha jilayaasha ka soo jiida safafka hore, iyo sidoo kale kooxo kooxeed - waxaas oo dhan waxay ka heli doonaan meel ka mid ah bandhig faneedka Thai 69 "Argagax Aasiya" Qaar ka mid ah daawadayaasha ayaa ka taga machadka ka dib daqiiqadaha ugu horeeya ee barnaamijka "kulul" ee barnaamijka, halka qaar kalena ay ku sii nagaadaan dhamaadka qadhaadh oo ay la dhacsan yihiin waxa ay arkeen iyo waxa ay soo mareen muddo dheer.
Awoodda ugu quruxda badan uguna muranka badan ee lagu bixiyay barnaamijka ping-pong show waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin nambarro laba-jinsi qiiro leh, iyo sidoo kale xarig-ka-saaris kufsi, inta lagu guda jiro qoob-ka-ciyaarku waxay doortaan daawade ay jecel yihiin oo ay la yeeshaan galmo cajiib ah isaga, xitaa haddii "dhibbanaha" uu si firfircoon u diido.
Martida kale ee nasiibka u leh martida dhexdooda waxay macno ahaan u qaban doonaan shumaca oo waxay ka caawin doonaan jilayaasha caanka ah-kuwa jecel jaceylka qaab kasta oo suurta gal ah, kaasoo galmada aan la xakameynin si lama filaan ah u caajistay oo doonayey inuu ku lug yeesho shisheeyaha hawsha. Bandhiga cusub ee '79 X-ee Pattaya' Mashruucii naxdinta lahaa ee Kamastura Show 79 waxaa la bilaabay horaantii wuxuuna maalinba maalinta ka dambeysa caan ku yahay shisheeyaha.
Abaabulayaashu waxay ballanqaadayaan inay layaabaan xitaa kuwa ugu casrisan dalxiisayaasha galmada kuwaas oo si qaldan u aaminsan inay wax walba arkeen. Moodooyinka xargaha ee 'X-show 79' ayaa gebi ahaanba ka madhan wax dhismayaal ah, taas oo macnaheedu yahay in xitaa khayaaliga ugu dhiirran ee dhagaystayaashu ay run noqon karaan.
Qodobbada muhiimka ah ee barnaamijka erotic-ka ah ayaa ah qoob-ka-ciyaarka leh waxyaabo ka mid ah xargaha oo ay sameeyaan gabdho, ficil layaab leh oo qaawan oo abeeso iyo xadhig dheer leh, show durbaan ah oo caan ku ah kuwa jecel Thai "strawberry" iyo muujinta qeybaha jirka ee gacmo-wadayaasha leh awoodda taabashada. Daawadayaasha safafka ugu horreeya waxay si gaar ah nasiib u yeelan doonaan - waxaa lasiiyaa noocyo kala duwan oo shucuur iyo shucuur ah.
Soo afjaridda xisbi cidlo ah waa lambarkii asalka ahaa, inta lagu gudajiro waxqabadka jilayaashu waxay ku dhaqaaqaan goobta mootada, halka ay ku muujinayaan farxad jacayl. Sida ay yiraahdaan, waa wax cabsi iyo xiiso leh labadaba, laakiin si kasta oo ay tahay lama ilaawi karo. Ku muuji "Big Eye" Pattaya Bandhigga saac ee Big Eye ee loogu talagalay dadka waaweyn, oo markii ugu horreysay lagu muujiyay XNUMX, waa taxane riwaayado midabbo kala duwan leh oo laga soo qaaday qoob-ka-ciyaarka cajiibka ah oo ay sameeyeen qoob-ka-ciyaarayaal Ruush ah oo laga qaadayo cayaaraha is-dhexgalka oo muujinaya midab madow oo qurux badan oo dabeecad leh ama dhakhtar qalliin caag ah oo leh sharaf aan badnayn.
Kaliya bandhigan, daawadayaashu waxay kudhowaan si dhow u baari karaan dhamaan soo jiidashada jilayaasha. Ka mid ah kuwa ku hadla - transvestites quruxsan, taas oo khabiir kasta uusan ku aqoonsan karin qurxinta dhalaalaya dhalaalaya.
Dheeraad ah, dhagaystayaashu waxay arki doonaan waxqabad dhiirrigelin ah oo ku saabsan durbaannada oo ay sameynayaan xubnaha labka ah, ka dib markaa ay jilayaashu ku martiqaadayaan geesiyaasha ka soo jeeda dhagaystayaasha inay ku celiyaan khiyaanadooda xariifnimada. Oo waxaa jira kuwa doonaya - badanaa ka mid ah dalxiisayaasha Shiinaha, kuwaas oo dhiirrigelintoodu mararka qaarkood ka baxdo sababaha oo dhan.
Guud ahaan, "Indhaha Weyn" waxaa lagu tilmaami karaa mid aad u qallafsan oo ka nadiifsan haddii qormadan ay ku habboon tahay dhammaanba wixii la xiriira madadaaladaas waxqabadka marka loo eego X-Show 69, laakiin dhagaystayaashu wali waxay lahaan doonaan wax ka badan aragti.
Bandhigga Transvestite ee ku yaal Coliseum, Pattaya Xaruntan waxaa loo tixgeliyaa inay tahay kabaarada ugu weyn Aasiya - tirada daawadayaasha ee isku mar la seexiya tiyaatarkaan waxay gaarayaan qof. Waxaa lagu dhisay qaabka Roman Colosseum, masraxa cabaret wuxuu ku kacay abaabulayaashii THB million wuxuuna noqday bandhiga ugu weyn uguna cajaa'ibka badnaa ee Boqortooyada. Diirad gaar ah hay'adda waxaa la siiyaa gudaha iyo qurxinta masraxa, iyo sidoo kale dharka jilayaasha, codka iyo muusigga la socda.
Farshaxan yaqaanka caanka ah ee Vichay Svaechin, oo abuuray waxqabad dhammeystiran oo soconaya daqiiqadaha 75, ayaa mas'uul ka ah abaabulka qoob-ka-ciyaarka, oo ay ku jiraan hiddaha mooryaanta. Ficilku wuxuu ka kooban yahay muusikada 14 iyo curinta qoob-ka-ciyaarka mana bixiyo is-dhexgelin, taas oo u oggolaanaysa daawadayaasha inay si aamusnaan leh uga dhex baxaan adduunka midabbo iyo muuqaallo dhalaalaya.
Ka dib markay dhammeeyeen "isboortiga" oo ay si fiican u diiriyeen dhagaystayaasha, ka qaybgalayaashu waxay u gudbayaan qaybta ugu naxdinta badan ee waxqabadka.
Waqtiga haray, dhagaystayaashu waxay la kulmi doonaan metamorphoses la yaab leh, taas oo ay sabab u tahay quruxda quruxda badan ee Thai oo soo bandhigaya qoob-ka-ciyaare casri ah oo dharka dhammaystiran oo dhammaystiran u noqonaya rag leh sharaf leh cabirro cajiib ah Dareenka ragga daawadayaasha ah ee 'ladyboys' way kala duwan yihiin, sidaa darteed waxaa habboon in wax laga ogaado diiradda la saarayo bandhigyada galmada ee Thailand ka hor.
Martida kale ee nasiibka u leh martida dhexdooda waxay macno ahaan u qaban doonaan shumaca oo waxay ka caawin doonaan jilayaasha caanka ah-kuwa jecel jaceylka qaab kasta oo suurta gal ah, kaasoo galmada aan la xakameynin si lama filaan ah u caajistay oo doonayey inuu ku lug yeesho shisheeyaha hawsha.
Bandhiga cusub ee '79 X-ee Pattaya' Mashruucii naxdinta lahaa ee Kamastura Show 79 waxaa la bilaabay horaantii wuxuuna maalinba maalinta ka dambeysa caan ku yahay shisheeyaha.
Abaabulayaashu waxay ballanqaadayaan inay layaabaan xitaa kuwa ugu casrisan dalxiisayaasha galmada kuwaas oo si qaldan u aaminsan inay wax walba arkeen.
Moodooyinka xargaha ee 'X-show 79' ayaa gebi ahaanba ka madhan wax dhismayaal ah, taas oo macnaheedu yahay in xitaa khayaaliga ugu dhiirran ee dhagaystayaashu ay run noqon karaan. Qodobbada muhiimka ah ee barnaamijka erotic-ka ah ayaa ah qoob-ka-ciyaarka leh waxyaabo ka mid ah xargaha oo ay sameeyaan gabdho, ficil layaab leh oo qaawan oo abeeso iyo xadhig dheer leh, show durbaan ah oo caan ku ah kuwa jecel Thai "strawberry" iyo muujinta qeybaha jirka ee gacmo-wadayaasha leh awoodda taabashada.
Daawadayaasha safafka ugu horreeya waxay si gaar ah nasiib u yeelan doonaan - waxaa lasiiyaa noocyo kala duwan oo shucuur iyo shucuur ah. Cudurka qoyan inta lagu guda jiro galmada sabab u ah dhaawaca burooyinka. Chlamydia Nasiib darro, cudurkani wuxuu leeyahay calaamado asaasi ah.
Calaamadaha ugu horeeya waxay muuqdaan 2 toddobaad kadib infekshanka. Waxaa ka mid ah: Dareemo xanuun badan markaad kaadidid. Kordhin tirada tirada dheecaanka hoosta haweenka. Xanuunka caloosha hoose. Dhibaatada iyo xanuunada xubnaha taranka inta lagu jiro galmada. Waraabowga Marxaladda koowaad ee waraabowga, necrosis qaybta ama necrosis ee unugyada dheecaanka ah ee ku dhaca xubnaha taranka. La taliyeyaasha siyaasadeed ee ugu sarreeya ee qaranka ayaa ku adkeysanaya inaanan dhaleeceeynin warqadda, sababtoo ah waxay igu khasbanaan lahaayeen inaan mar dambe dabooli doono ololahayga.
Bennett marnaba wax talaabo ah kama qaadin, hadda waxay qirtay in ay tahay mid ka mid ah qaladaadkeyga ugu weyn ee nolosha. Qorshaha Blogger ee Intent Laakiin Bernie O'Hare, oo ah blogger ka dambeeya goobta uu Kieklak ku soo qoray faallooyinkiisa waa la daalay. Wuxuu qoray: Eac certification russia aan ka faaideysto badankoodu waa gumeysiga qalafsan ee qalooca sida Kieklak iyo kan ugu horreeya.
Inkastoo uu ugu dambeyntii ku wareejiyay istiqaaladiisa, haddana isla markiiba ma aqbalin. Kala duwanaanta Dalka Ficil kasta oo ka mid ah ka qaybgalayaashu waxay u muuqdaan kuwo la yaab leh oo xad dhaaf ah. Nasiib darro, dhammaantood waa kuwo caadi ah, waxaanay dib u eegaan waxa dalka ka dhacayay sannadihii la soo dhaafay.
Xitaa Musharaxa madaxweynenimada ee dii, John McCain ayaa ku qoslay markii taageeraha loo yaqaan Hillary Clinton oo qadarinaysa xiritaanka kulan albaab ah. Saaxiibka ayaa la kulmay saaxiibkii ay wada socdeen ee McCain Sarah Palin ma aysan dhicin musharaxnimadooda. Waxay weli la kulantay iyada oo ay ololeyaal u ah musharixiinta kale ee dalka oo idil, sida haweenka soo socda ee tartamayaashoodii musharaxa gudoomiye ku xigeenka Nikki Haley, Senate ku qanacsanahay Christine O'Donnell iyo Kirsten Gillibrand.
Caymiska Maamulaha Laakiin maxaa ku dhacay Sam Bennett? Inkasta oo ay ka luntay tartanka Guriga, waayo-aragnimadeeda ku saabsan raadinta ololaha waxay u horseeday inay u dooddo haweenka iyo ka horjeeda warbaahinta si ay u noqoto Agaasimaha Ururka Haweenka ee Ololaha Ololaha Haweenka.
Maanta, Bennett waxay awood u leedahay inay isbedel ku samayso heer qaran iyada oo kor u qaadaysa ajandaha si loogu yeero jinsiga iyo in lagu adkeeyo xisaabtanka saxaafadeed marka jinsiga haweenka ah ee caymiska dumarku dhacaan. Waxay ka go'an tahay in la arko in haweenka soo socda ee siyaasadda marnaba aysan ku dhicin wixii ay ku adkaatay: Waa wakhti in la yiraahdo, ku filan waa ku filan. Mar dambe ma sii fadhiisan doonno iyada oo wariyeyaashu ay falanqeynayaan xidhxidhka hoggaamiyayaasha haween halkii ay ku guulaysan lahaayeen.
Posted in Galmada haweenka waaweyn